I-Large Eagle Bay Apartment ikufutshane kakhulu elunxwemeni
Le ndlu inobunewunewu ikumgangatho ophezulu kukuhamba nge-180m kuphela ukusuka kumanzi akhuselweyo kunye nonxweme olucacileyo, olumhlophe lwe-Eagle Bay. Kukho iindlela ezimangalisayo zonxweme kunye nokuhamba / ukubaleka / ukukhwela ibhayisekile ezisingqongileyo, kunye nezinye zezona ndawo zibalaseleyo zekhefu lasebusika lokusefa ebusika kunye nokuloba okugqwesileyo elunxwemeni nakumatye aselunxwemeni. Kufutshane ne-Eagle Bay Brewery, iWise Winery kunye neLot 80 Tavern kunye neDunsborough Town kuphela umgama wemizuzu esi-7 apho uya kufumana iivenkile ezinkulu kunye neendawo zokutyela.
Le ndlu yabucala ingaphakathi kwindlu ebanzi enamagumbi ama-5 enziwe ngamaplanga elunxwemeni enemigangatho eyenziwe ngamaplanga, yakhiwe ngezithuba ezinkulu ze-Jarrah ezineminyaka eli-100 ubudala kunye neefestile zomsedare kunye nengca ehonjisiweyo, imithi emikhulu yendalo yomthunzi kunye nokhuseleko lokubiyela umntwana kunye nobungqina besilwanyana sasekhaya. Le yindlu yaselwandle yakudala enesimanje kakhulu, ingaphakathi elitsha kraca. Iindwendwe ezikwigumbi eliphezulu ziyakwazi ukufikelela kwigumbi lokulala elikumgangatho ophezulu kunye nekhitshi, indawo yokutyela, indawo yokuphumla kunye nebalcony. Azikho ezinye iindwendwe ezihlala ekhaya xa umgangatho ophezulu uqeshwa njengendawo yokuhlala, ke ibucala ngokupheleleyo.
Kukwakho nekhitshi langaphandle eline-BBQ kunye ne-rustic yabucala yangaphandle ishawa kunye nebhafu.
Sirenta le ndlu njengendawo yokulala yabucala yezibini ezitshatileyo okanye indlu yonke kumaqela amakhulu phantsi koluhlu olwahlukileyo. Olu luhlu luyiflethi kuphela. Igumbi lokulala elongezelelweyo linokwenziwa lifumaneke kunye neendleko ezongezelelweyo.
IEagle Bay luhambo lweyure ezi-3, emazantsi ePerth kwingingqi ekuMazantsi Ntshona weOstreliya.
Ikufuphi needolophu zaseDunsborough, Yallingup kunye neBusselton kwaye yinxalenye yoMmandla weWine weMargaret River.
I-Eagle Bay Beach ijikelezwe yi-bushland kunye nonxweme oluhle kakhulu nangona kunjalo idume kakhulu ngesanti emhlophe kunye namanzi e-turquise kwaye yenye yeelwandle ezimbalwa ezikhuselweyo zaseMntla Mpuma e-WA.
Isitshixo sikwibhokisi yokutshixa esendlwini.
Sifumaneka kuyo nayiphi na imibuzo nge-imeyile okanye ngefowuni.